दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार ! – iNews16
दुब्लो पातालो भएकै कारण कतिपय मानिसहरु तौल बढाउने अर्थात् मोटाउने औषधी खान्छन् तर यस्ता औषधीहरुले स्वास्थ्यमा गम्भीर हाने पु¥याउने गर्छ । चिकित्सकहरु पनि यस्ता औषधिहरु सेवन नगर्न सुझाव दिन्छन् । हाम्रो शरीरको वजन बढाउन र पातलो वा दुब्लो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउन कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटले भरिपूर्ण केही चिजहरुको खानाले साता दिनमै तपाईको शरीरको वजन बढ्नेछ ।
Previous यस कारण बिबाहित महिला सग आकर्षित हुने गर्दछ पुरूषहरू
Next १४ लाखमै यसरी बनाउन सकिन्छ कोरियन प्रविधिको आधुनिक घर (भिडियोसहित)